Covid Variants - What are the Covid Sars Cov 2 Coronavirus Variants?
Covid-19: Firy ny isan-karazany ao, ary inona no fantatsika momba azy ireo?
Ny karazana virus dia mitranga rehefa misy ny fiovana - na ny fiovan'ny toetr'andro - ny fototarazon'ny virus. Ny toetran'ny virus RNA toy ny coronavirus dia mivoatra sy miova tsikelikely. “Ny fisarahana ara-jeografika dia miteraka fahasamihafana misy eo amin'ny fototarazo,”.
Ny fiovan'ny viriosy - anisan'izany ny coronavirus nahatonga ny areti-mandringana COVID-19 - dia sady tsy vaovao no tsy nampoizina.
“Miovaova ny otrikaretina RNA rehefa mandeha ny fotoana, ny sasany mihoatra ny hafa. Ohatra, miova matetika ny virus gripa, izany no antony anoloran'ny mpitsabo anao hanana vaksinin'ny gripa vaovao isan-taona.”